Muusiga | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: July 25, 2020 00: 10 No Comments
Qalliinka: way faraxsan yihiin sababtoo ah sayidaddeedii waxay ku heesaysaa afkooda hooyo. "Maxay si gaar ah u tahay haddii ay ku heesayso Tshiluba? "	Akhri wax dheeraad ah
Waajibaadka Xusuusta: Koffi Olomidé iyo Fàbregas; waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu burburka badan ee jira; Ciyaarkee bay labadan fannaaniin ciyaarayaan? Fannaaniinteennu ma hilmaamaan inaanu Afrika joogno? Sidee ayay Koffi Olomidé iyo Fàbregas u oggolaadeen in sidan loo sawiro?
Posted By: KongoLisolowaa: July 14, 2020 05: 28 No Comments
Waa maxay booskaasi ?? Muxuu sidan ula mid yahay Koffi oo uu ku hayaa muusikada muusikada ee yari? Koffi Olomidé, guriga dhexdiisa, wuxuu isku dhejiyaa fanaankiisa da'da yar Fàbregas. Waa col ...	Akhri wax dheeraad ah
Marka lammaanaha Jay-Z-Beyonce aysan isu soo qaban karin dadweynaha; Jay-Z iyo Beyonce waxay iska dhigaan inaysan laba qof ku wada noolayn, guri
Posted By: KongoLisolowaa: July 14, 2020 00: 00 No Comments
Waxaad guursatay sanado; Waxaad wada nooshihiin; Waxaad isla wadaagtaa sariir; Waxaad dhalaysay carruur; Wax walba waad sameysay; Adiga ayaa naftaada ka dhigtay waxa nin iyo naagtiisu sameeyaan ...	Akhri wax dheeraad ah
Faqri: xitaa wadaaddada reer Shiinaha waxay u yimaadaan inay u duceeyaan dadka madow / Afrikaanka Afrika "Abuuraha ayaa ka xanaaqay jaahilnimada iyo doqonnimada madow / Afrikaan" Kaliya madow / Afrikaanka ayaa hurda ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 29, 2020 13: 30 No Comments
Soo gudbinta madow / Afrikaanka: xitaa heesta reer Congo Werrason, oo loogu yeero boqorka kaynta, halkii uu ka hadli lahaa jahwareerka kaymaha awowayaashiis, wuxuu doorbidayaa ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug12 06: 50